बुङगल नगरपालिकाको वडा नं ६ को वडा कार्यालयको साईनबोर्ड किन राखिएन ? • Kalanga News
गृह/प्रदेश समाचार/प्रदेश नं. ७/बुङगल नगरपालिकाको वडा नं ६ को वडा कार्यालयको साईनबोर्ड किन राखिएन ?
मकरराज धामी – बुङगलको वडा नं ६ को वडा कार्यालयमा साईनबोर्ड छैन । साविकको पिपलकोट गा.वि.स रहेको खौलाधारमा अहिले नगरपालिकाको वडा कार्यालय रहेको छ । तर कार्यालय बाहिर रहेको गााउविकास समितिको कार्यालय पिपलकोट लेखिएको र नागरिक वडा पत्र पनि साविकको गा.वि.स कै छ । जनप्रतिनिधिले यस विषयमा ध्यान दिनु पर्ने हो । तर आफ्ना नजिकका आफन्तलाई योजना बाँडदैमा ठिक्क भएको र कार्यालयको काममा वडाध्यक्षले ध्यान नदिएको स्थानिय विर्ख बोहराले बताए । उनले भने वडाका योजनामा अध्यक्षकै हालीमुहाली छ । अहिले सम्म वडामा देखिने गरि दिर्घकालीन कुनै काम गर्न सकेका छैनन । समाज रुपान्तरण र विकासका कुरै छोडौ एउटा कार्यालयको साईन बोर्ड सम्म परिवर्तन गर्न नसक्ने वडाध्यक्ष के समाज परिवर्तन गर्लान उनले भने । वडा कार्यालयको साईन बोर्ड भित्र कार्यालयमा राखिएको छ । बाहिर सबैले देख्ने गरि राख्नु पर्ने ठाँउमा किन लुकाएर राखियो उनले उल्टै प्रश्न गरे ।
यस विषयमा वडा नं ६ का वडाध्यक्ष धन बहादुर सिंह संग कुरा गर्दा उनले आफु माथी लागेका आरोप सबै झुटा भएको बताए । अहिले आफु विरामी भएकाले उपचारमा धनगडी भएको भन्दै उनले कार्यालयको साईन बोर्डको विषयमा आफ्नो कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै अन्य आरोप राजनैतिक पुर्वाग्रही भएर लगाएको बताए । वडाको विकास गरेन भन्नु राजनैतिक पुर्वाग्रही भन्दा अरु केहि हैन । कार्यालयको साईनवोर्ड छदैछ । हामी साविककोे पिपलकोट गा.वि.सको भवनमा वडाका कामकाज संचालन गर्दै छौँ । त्यति बेला गा.वि.सको साईन बोर्ड र वडापत्र भित्तामै लेखिएको थियो । मैले भवनको बाहिरि भाग रंगाउनका लागी भनेर चुना किनेर राखेको छु । कार्यालय सहयोगीलाई मान्छे खोजेर काम गर्नु भनेको थिए । तर काम गरेनन । अब छिट्टै वाल पेन्टीङको काम गरिने उनले बताए ।
साविकका पिपलकोट, दहबगर, खिरातडी, कफलसेरी र देउलिकोट मिलेर बुङगल नगरपालिका भएको करिब तीन बर्ष वित्दै छ । समय बदलियो, जनप्रतिनिधि बदलिए, कर्मचारी बदलिए तर हाल सम्म वडा कार्यालयको पहिचान हुने गरि एउटा साईनबोर्ड बदलिएन । वडा कार्यालयले भवन मर्मत गर्दा पनि भवनको बाहि पट्टि अझै पनि पिपलकोट गा.वि.स को कार्यालय लेखेको देख्न सकिन्छ । स्थानिय तहको चुनाव भएको दुई बर्ष वित्न लाग्दा पनि साईनबोर्ड किन राख्न सकेका छैनन ।